Yɛbɛyɛ Dɛn De ‘Ntoboase Atwɛn’? | Adesua
“Monwɛn Mma Mpaebɔ”
Yɛbɛyɛ Dɛn De ‘Ntoboase Atwɛn’?
ASETENAM NSƐM N’aduru ne Onyankopɔn Som!
Nguanhwɛfo Baason, Abirɛmpɔn Baawɔtwe​​—Dɛn na Ɛkyerɛ Nnɛ
Tie Ahwɛfo a Yehowa Apaw Wɔn No
Ahwɛfo, Munsuasua Ahwɛfo Kunini No
TETE WƆ BI KA “Mayɛ Akyekyedeɛ​​—Mede Me Fie Nam”
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | November 2013
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mexican Sign Language Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uruund Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
“Mede ntoboase bɛtwɛn.”—MIKA 7:7.
Dɛn na yebetumi asua afi Mika hɔ?
Nneɛma bɛn na yɛretwɛn sɛ ebesisi?
Dɛn na yɛbɛyɛ de akyerɛ sɛ yɛn ani sɔ Yehowa abotare?
1. Yɛanhwɛ yiye a, dɛn na ɛbɛma yɛn abotare asa?
WƆDE Mesia Ahenni no sii hɔ afe 1914. Saa bere no na Satan nhyehyɛe no nna a edi akyiri fii ase. Ɔko baa soro ma Yesu tow Ɔbonsam ne n’adaemone guu asase so. (Monkenkan Adiyisɛm 12:7-9.) Satan nim sɛ “ne bere a aka yɛ tiaa.” (Adi. 12:12) Nanso ebia ebinom bɛka sɛ, “‘Bere tiaa’ yi na adan mfe pii yi?” Enti wobenya adwene sɛ awiei no akyɛ dodo. Yɛn nso ɛ? Bere a yɛretwɛn Yehowa ma wasɛe Satan nhyehyɛe yi, yɛn abotare asa anaa?
2. Dɛn na yebesusuw ho wɔ adesua yi mu?
2 Sɛ yɛannya abotare a, ebetumi ama yɛapere yɛn ho ayɛ biribi a ɛnsɛ sɛ yɛyɛ. Ɛnde, yɛbɛyɛ dɛn anya ntoboase atwɛn? Nsɛmmisa a edidi so yi bɛboa yɛn ma yɛahu ɔkwan a yɛbɛfa so ayɛ saa: (1) Dɛn na yebetumi asua afi Mika hɔ na yɛanya ntoboase? (2) Nneɛma bɛn na ɛbɛkyerɛ sɛ awiei no adu ara ne sa? (3) Dɛn na yɛbɛyɛ de akyerɛ sɛ yɛn ani sɔ Yehowa abotare?
3. Na Israelfo tebea te sɛn wɔ Mika bere so?
3 Monkenkan Mika 7:2-6. Yehowa diyifo Mika hui sɛ Israelfo ne Yehowa ntam ayɛ basaa. Bere a eduu ɔhemmɔne Ahas bere so deɛ, na bɔne adonnɔn ɔman no paa. Mika kae sɛ Israelfo asobrakyefo no ayɛ sɛ “ohwirom” ne “nsɔe ban.” Sɛ obi ho kɔka ohwirom anaa nsɔe ban a, ebetumi apira no. Saa ara na na Israelfo no te. Nneɛma sɛee koraa ma afei deɛ na ɔdɔ atu ayera afi abusuafo mu mpo. Mika hui sɛ ɔrentumi nyɛ tebea no ho hwee, enti ɔkɔɔ Yehowa anim kaa ne haw nyinaa kyerɛɛ no. Afei ɔtwɛn hwɛɛ nea Onyankopɔn bɛyɛ. Ná Mika wɔ ahotoso paa sɛ, sɛ Yehowa bere so a, ɔbɛkeka ne ho.
4. Ɔhaw bɛn na yɛtaa fa mu?
4 Nnipa a yɛne wɔn wɔ hɔ nnɛ akɔyɛ sɛ Mika beresofo; obiara asɛm mfa obi ho. Nnipa pii yɛ ‘bonniayɛfo, wonni nokware, na wonni tema.’ (2 Tim. 3:2, 3) Sɛ wo ne obi te mpɔtam anaa wo ne no yɛ adwuma anaa wo ne no kɔ sukuu na ɔte saa a, ɛyɛ yaw paa. Nanso ɔhaw a Onyankopɔn asomfo bi refa mu ani sõsõ sen eyi koraa. Yesu kae sɛ, sɛ obi bedi n’akyi a, n’abusuafo betu wɔn ani asi no so ataa no. Asɛm a Yesu kae no te sɛ nea ɛwɔ Mika 7:6 no. Yesu kae sɛ: “Mede mpaapaemu na ɛbae na ɔbarima asɔre atia ne papa, na ɔbabea asɔre atia ne maame, na ɔbea warefo asɔre atia n’asebea. Nokwarem no, obi ankasa fiefo na wɔbɛyɛ n’atamfo.” (Mat. 10:35, 36) Ade biako a ɛyɛ yaw paa ne sɛ wo som nti wo busuani bedi wo ho fɛw na wasɔre atia wo! Sɛ worehyia ɔhaw a ɛte saa a, ngogow wo ho. Mmom, kɔ so ara bata Yehowa ho na nya ntoboase twɛn kosi sɛ Yehowa bere bɛba. Sɛ yɛampa abaw na yɛde yɛn adesrɛ to n’anim daa a, ɔbɛma yɛn nyansa na wahyɛ yɛn mpamden ma yɛagyina tebea no ano.
5, 6. Dɛn na Yehowa de hyiraa Mika? Dɛn na Mika amfa n’ani anhu?
5 Mika nyaa ntoboase twɛn Yehowa, na Yehowa nso hyiraa no. Mika de n’ani huu Ɔhene Ahas ne n’amammuo bɔne no awiei. Bere a Ahas ba Hesekia bɛyɛɛ ɔhene na ɔpagyaw nokware som no, Mika de n’ani hui. Bio, nkɔm a Yehowa maa Mika hyɛ faa Samaria ho no baa mu bere a Asiriafo tow hyɛɛ Israel ahemman a ɛwɔ atifi fam no so no.—Mika 1:6.
6 Nanso ɛnyɛ biribiara a Yehowa maa Mika hyɛɛ ho nkɔm na ɔtenaa ase huu ne mmamu. Emu biako ne asɛm a Mika kyerɛwee yi: “Nna a edi akyiri no mu no, Yehowa fie bepɔw betim hɔ wɔ mmepɔw atifi, na wɔbɛma so asen nkoko nyinaa, na amanaman bɛsen yuu akɔ hɔ. Na aman pii bɛkɔ akɔka sɛ: ‘Mommra mma yɛnkɔ Yehowa bepɔw so.’” (Mika 4:1, 2) Mika wui ansa na nkɔmhyɛ yi renya mmamu. Nanso bere a ɔte ase no na wasi ne bo sɛ ɔbɛbata Yehowa ho akosi ne wuda; wamma nkurɔfo nneyɛe anhaw no. Ɔkyerɛwee sɛ: “Aman no mu biara bɛnantew ne nyame din mu, na yɛn de, yɛbɛnantew Yehowa yɛn Nyankopɔn din mu daa daa.” (Mika 4:5) Ade biako bi na ɛboaa Mika ma ɔde ntoboase twɛnee wɔ amanehunu bere no mu. Ɛne sɛ na ogye di paa sɛ Yehowa bɛma ne bɔhyɛ biara abam. Ampa, na odiyifo nokwafo yi wɔ Yehowa mu ahotoso.
7, 8. (a) Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛde yɛn ho to Yehowa so? (b) Dɛn na ɛbɛma bere akɔ ntɛmntɛm wɔ yɛn ani so?
7 Yɛwɔ Yehowa mu ahotoso te sɛ Mika anaa? Nneɛma pii nti na ɛsɛ sɛ yɛde yɛn ho to no so. Wo deɛ hwɛ, yɛde yɛn ani ahu Mika nkɔmhyɛ no mmamu. “Nna a edi akyiri” yi mu no, nnipa mpempem a wofi aman, mmusua ne kasa nyinaa mu asen yuu aba “Yehowa fie bepɔw” so. Aman yi bi te adowa nhoma so, nanso nnipa mpempem fi saa aman yi mu aba Yehowa fie. Wɔde wɔn ‘nkrante ayɛ nsɔw’ na ‘wonsua akodi bio.’ (Mika 4:3) Ɛyɛ akwannya kɛse paa sɛ yɛyɛ Yehowa nkurɔfo, nkurɔfo a yɛwɔ asomdwoe ankasa!
8 Yɛn nyinaa pɛ sɛ Yehowa sɛe wiase bɔne yi ntɛm. Nanso sɛ yebetumi anya abotare atwɛn a, ɛsɛ sɛ yesusuw nsɛm ho sɛ Yehowa. Yehowa ayi da bi asi hɔ a ɔde bebu adesamma atɛn. Ɔnam “ɔbarima bi a wapaw no,” Yesu Kristo so na ɔbɛyɛ saa. (Aso. 17:31) Nanso seesei deɛ Onyankopɔn abue kwan ama nnipa ahorow nyinaa sɛ wonnya “nokware no ho nimdeɛ a edi mũ” na wɔmfa mmɔ wɔn bra. Eyi ho hia paa efisɛ nkurɔfo nkwa da asiane mu, na nokware no na ebetumi agye wɔn. (Monkenkan 1 Timoteo 2:3, 4.) Wiase awiei adu ara ne sa. Enti nea ehia ne sɛ yɛde yɛn adwene nyinaa besi asɛnka adwuma no so na yɛaboa nkurɔfo ma wɔanya Onyankopɔn ho nimdeɛ a edi mu. Yɛyɛ saa a, bere bɛkɔ ntɛmntɛm, na yɛn ani bɛba yɛn ho so no, na Yehowa atemmu da no aba. Wo deɛ hwɛ sɛ awiei no aba na woabu kɔmpɔ ahwɛ w’akyi ahu sɛ wode nsi ne ahokeka paa na ɛyɛɛ asɛnka adwuma no! Hwɛ sɛnea w’ani begye afa!
NNEƐMA BƐN NA ƐBƐKYERƐ SƐ AWIEI NO ADU ARA NE SA?
9-11. Asɛm a ɛwɔ 1 Tesalonikafo 5:3 no aba mu anaa? Adɛn nti na wubua saa?
9 Monkenkan 1 Tesalonikafo 5:1-3. Ɛrenkyɛ koraa amanaman no bɛpae mu aka sɛ “Asomdwoe ne dwoodwoo!” Nanso ‘ɛsɛ sɛ yɛwɛn na yɛn ani da hɔ’ na nneɛma amfa yɛn ase. (1 Tes. 5:6) Ɛnde, nea ɛbɛboa ma yɛawɛn no, momma yɛnhwɛ nneɛma bi a asisi ne sɛnea abɔ kwan ama saa mpaemuka yi.
10 Wiase ko a edi kan ne nea ɛto so abien baa awiei no, amanaman no peree asomdwoe denneennen. Bere a wiase ko a edi kan baa awiei no, wɔde Amanaman Apam no sii hɔ de hwehwɛɛ asomdwoe. Wiase ko a ɛto so abien akyi no, nkurɔfo de wɔn ani too Amanaman Nkabom no so sɛ ɛde asomdwoe bɛba wiase. Aban ahorow ne ɔsom mu akannifo de wɔn werɛ hyɛɛ ahyehyɛde abien yi mu sɛ ɛno na ɛbɛma adesamma asom adwo wɔn. Yɛbɛyɛ nhwɛso a, Amanaman Nkabom no de too gua sɛ 1986 yɛ asomdwoe afe. Saa afe no, aman mpanyimfo ne ɔsom mu akannifo hyiaa Katolek asɔre no panyin wɔ Assisi, Italy, bɔɔ asomdwoe mpae.
11 Nanso yɛrentumi nka sɛ saa mpaemuka no anaa asomdwoe mpaemuka foforo biara ama 1 Tesalonikafo 5:3 aba mu. Adɛn ntia? Efisɛ kyerɛwsɛm no kae sɛ wɔka sɛ “Asomdwoe ne dwoodwoo!” a, “mpofirim ara na ɔsɛe bɛba,” nanso amanaman no mpaemuka no mfaa ɔsɛe biara mmae.
12. Dɛn na yebetumi aka wɔ “Asomdwoe ne dwoodwoo!” mpaemuka no ho?
12 Ɛnde, hena na ɔbɛpae mu aka “Asomdwoe ne dwoodwoo!” a Bible ka ho asɛm no? Kristoman ne asɔre foforo mu mpanyimfo ho bɛba asɛm yi mu sɛn? Atumfoɔ no nso ɛ? Dɛn na wɔbɛyɛ? Ɛno deɛ Bible nka ho asɛm biara. Nanso sɛn na wɔbɛka no oo, nnipa dodow ahe na wobegye adi oo, nokwasɛm bi wɔ hɔ a yebetumi de yɛn nsa asi yɛn bo aka. Ɛno ara ne sɛ ɛremfa asomdwoe biara mma. Mpɛn dodow a saa wiase yi wɔ hɔ deɛ, Satan ara na odi so. Wiase no aporɔw atetew ma woyɛ no hwee a ɛrenyɛ yiye. Enti sɛ yɛn mu bi ma ne koma kodi nnaadaasɛm yi akyi na ɔde ne ho fɔrefɔre Satan wiase no a, ɛbɛyɛ awerɛhosɛm paa!
13. Adɛn nti na abɔfo kura ɔsɛe mframa no mu?
13 Monkenkan Adiyisɛm 7:1-4. Seesei a yɛretwɛn sɛ 1 Tesalonikafo 5:3 bɛba mu no, abɔfo ahoɔdenfo kura mframa bi mu. Saa mframa yi na ɛde ahohiahia kɛse no bɛba. Ɛnde, wokura mu retwɛn dɛn? Ɔsomafo Yohane kyerɛwee sɛ ɛsɛ sɛ wɔsɔ “yɛn Nyankopɔn nkoa” a wɔasra wɔn no ano korakora. * Sɛ wonya sɔ wɔn ano wie a, abɔfo no begyae ɔsɛe mframa no mu. Ɛba saa a, dɛn na ebesi?
14. Dɛn na ɛkyerɛ sɛ Babilon Kɛse no sɛe abɛn?
14 Babilon Kɛse anaa atoro som ahemman no begye n’ani so nnansa yi ara; wɔbɛsɛe no pasaa. Na sɛ bere so sɛ wɔresɛe no a, amanaman ne nnipakuw nyinaa beyi ne baako ahyɛ ne nsa. Ɛnnɛ koraa a yɛrekasa yi, biribiara kyerɛ sɛ ne sɛe abɛn. (Adi. 16:12; 17:15-18; 18:7, 8, 21) Seesei sɛ wutie radio anaa wohwɛ atesɛm nkrataa mu a, wuhu sɛ nkurɔfo rebɔ asɔre ne asɔfo akyi paa. Nanso afei koraa na Babilon Kɛse no akannifo redi akɛsesɛm. Nanso wɔredaadaa wɔn ho; wonnim nea ɛrebɛto wɔn. Nea ehia ara ne sɛ “Asomdwoe ne dwoodwoo!” mpaemuka no aba; mpofirim ara wiase atumfoɔ no bɛdan agu atoro som so ayɛ no defedefe. Afei Babilon Kɛse akyi bɛyera korakorakora! Sɛ yɛhwɛ nneɛma akɛse akɛse a ɛrebesisi nnansa yi a, wunhu sɛ ɛsɛ sɛ yenya abotare twɛn?—Adi. 18:8, 10.
15. Adɛn nti na Yehowa anya abotare atwɛn?
15 Nkurɔfo rebɔ Yehowa din ahohora, nanso wanya ho koma retwɛn kosi bere a ɛfata ansa na wakeka ne ho. Yehowa ani nnye ho sɛ nnipa a wɔwɔ koma pa bɛsɛe. (2 Pet. 3:9, 10) Yɛn nso ɛ? Saa na yɛte? Bere a yɛretwɛn Yehowa da no, nneɛma pii wɔ hɔ a yebetumi ayɛ de akyerɛ sɛ yɛn ani sɔ Yehowa abotare. Momma yɛnhwɛ emu bi.
16, 17. (a) Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛboa wɔn a wɔagyae Yehowa som? (b) Sɛ obi agyae Yehowa som a, adɛn nti na ɛnnɛ paa na ehia sɛ ɔsan ba Yehowa nkyɛn?
16 Boa wɔn a wɔagyae Yehowa som. Yesu kae sɛ, sɛ oguan biako mpo yera na wohu no a, anigye ba soro. (Mat. 18:14; Luka 15:3-7) Sɛ obi da no adi sɛ ɔdɔ Yehowa na sɛ seesei ɔnkɔ asɛnka anaa adesua mpo a, Yehowa dwen onii no ho paa. Sɛ yɛboa saafo no ma wɔsan ba asafo no mu a, Yehowa ne abɔfo no nyinaa ani gye.
17 Seesei a yɛrekasa yi, wo som te sɛn? Woate ada anaa? Ebia asafo no muni bi yɛɛ wo biribi enti na wo ne asafo no mmɔ bio. Sɛ saa mpo a, bere atwam, enti bisa wo ho sɛ: ‘Seesei metumi de me nsa asi me bo aka paa sɛ biribiara rekɔ yiye ma m’ani gye? Yehowa na ɔyɛɛ biribi tiaa me, anaa me yɔnko nipa a ɔnyɛ pɛ? Yehowa Nyankopɔn ayɛ me bɔne pɛn?’ Nokwasɛm ne sɛ Yehowa yɛ yɛn papa daa. Wo deɛ hwɛ, yehyiraa yɛn ho so sɛ yɛbɛsom Yehowa daa, nanso seesei sɛ yɛn mu bi de ne som ato nkyɛn mpo a, ɔma n’akyɛde so ne so. (Yak. 1:16, 17) Ɛrenkyɛ Yehowa da no bɛba. Enti ɛnnɛ ne bere a ɛsɛ sɛ wosan ba ma yɛn soro Agya no yɛ wo awaawaa atuu ba asafo no mu bio. Kae sɛ asafo no mu nkutoo ne baabi a asomdwoe ne ahobammɔ wɔ wɔ awiei bere yi mu.—Deut. 33:27; Heb. 10:24, 25.
Yehowa nkurɔfo yɛ nea wobetumi biara boa wɔn a wɔagyae asafo no ma wɔsan ba Yehowa nkyɛn (Hwɛ nkyekyɛm 16, 17)
18. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yetie mpanyimfo no?
18 Brɛ wo ho ase tie mpanyimfo a asafo no de wɔn reyɛ adwuma no. Yehowa yɛ Oguanhwɛfo a ɔdɔ yɛn paa, enti daa ɔkyerɛ yɛn kwan na ɔbɔ yɛn ho ban. Wapaw ne Ba no Oguanhwɛfo Panyin wɔ ne nguan so. (1 Pet. 5:4) Asafo ahorow bɛboro 100,000 na ɛwɔ hɔ, na mpanyimfo a wɔwɔ mu no nya bere ma Onyankopɔn guan biara. (Aso. 20:28) Sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase tie mpanyimfo yi a, nea ɛkyerɛ ne sɛ yɛn ani sɔ nea Yehowa ne Yesu ayɛ ama yɛn nyinaa.
19. Dɛn na ɛbɛma yɛayɛ biako?
19 Ɛsɛ sɛ yɛne yɛn nuanom yɛ biako. Dɛn na eyi kyerɛ? Sɛ atamfo tow hyɛ asraafo bi so a, ntɛm pa ara obiara hu sɛ ohia ne nua, enti wɔka wɔn ho bom. Ɛba saa a, na wɔayɛ sɛ ɔfasu dennen a atamfo ntumi mmɔ nwura mu. Satan ama ne homene so wɔ Onyankopɔn nkurɔfo so. Enti ɛnyɛ saa bere yi na yɛbɛma watĩ-me-waka-me apaapae yɛn mu. Ɛnnɛ ne bere a ɛsɛ sɛ yebu yɛn ani gu yɛn nuanom sintɔ so na yɛne wɔn yɛ biako na yɛde yɛn werɛ hyɛ Yehowa mu.
Ɛnnɛ ne bere a ɛsɛ sɛ yɛyɛ biako ne Satan ne adaemone di asi (Hwɛ nkyekyɛm 19)
20. Dɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ nnɛ?
20 Momma yɛn nyinaa nkentene yɛn ho nsom Yehowa na yɛmfa ntoboase ntwɛn. Momma yennya abotare ntwɛn nkosi sɛ wɔbɛpae mu aka “Asomdwoe ne dwoodwoo!” na wɔasɔ wɔn a wɔasra wɔn no ano korakora. Ɛno akyi no, abɔfo baanan no begyae ɔsɛe mframa no mu na wɔasɛe Babilon Kɛse no pasaa. Bere a yɛretwɛn eyinom nyinaa no, momma yentie akwankyerɛ biara a mpanyimfo a wodi Yehowa ahyehyɛde no anim de bɛma yɛn no. Momma yɛnyɛ biako ne Ɔbonsam ne adaemone nni asi! Ɛnnɛ ne bere a ɛsɛ sɛ yetie odwontofo no afotu yi: “Munnya akokoduru, na mo bo nyɛ duru, mo a moretwɛn Yehowa nyinaa.”—Dw. 31:24.
^ nky. 13 Sɛ wopɛ sɛ wuhu wɔn a wɔasra wɔn no nsɔano a edi kan ne wɔn nsɔano a etwa to a, hwɛ January 1, 2007, Ɔwɛn-Aban no kratafa 30-31.
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM November 2013